Dr Ansumali Joshi's Diabetes, Thyroid & Endocrine Clinic, Kathmandu, Nepal: 2016
प्रजनन उमेरका महिलाको रोग, जसले अनुहारमा रौं उमार्छ
पीसीओएस् अर्थात महिनावारी गडबडीका कारणहरु
हर्मोनको गडबडीका कारण पछिल्लो समय महिलाहरुमा विभिन्न रोग देखिन थालेका छन् । थाइराइड, मधुमेह बाहेक पनि हर्मोनको गडबढीकै कारण महिलाहरुमा देखिने अर्को ठूलो समस्या भनेको पीसीओएस् हो ।
यो रोगका बारेमा अझै पनि धेरै मानिसलाई थाहा नहुन सक्छ । यो रोग विशेषगरी प्रजनन उमेर समूह (२०-४०) वर्ष उमेर समूहका महिलामा बढी देखिने गर्छ । यो रोग लागेमा कोही महिलालाई निसन्तानपन देखिने गर्दछ ।
जब कि यसबारे पर्याप्त जानकारी प्राप्त गरी समयमै उपचार गरेको खण्डमा यो रोगबाट छुटकारासमेत पाउन सकिन्छ ।
के हो पिसीओएस् रोग ?
पिसीओएस् भनेको पोलिसिस्टिक ओभरी सिण्ड्रोम हो । यो हर्मोनको गडबढीका कारण हुने एक प्रकारको रोग हो । सामान्यतया, प्रत्येक महिलाहरुमा केही हदसम्म पुरुषको हर्मोन हुने गर्छ र प्रत्येक पुरुषमा केही मात्रामा महिलाको हर्मोन हुने गर्दछ ।
पोलिसिस्टिक ओभरी सिण्ड्रोम (पीसीओएस्) भएका महिलामा पुरुषको हर्मोन केही मात्रामा बढी हुने गर्दछ । जसले गर्दा महिलाहरुमा महिनावारीको गडवडी हुने, शरीर तथा अनुहारहरुमा रौं पलाउने, डण्डीफोर धेरै आउने, कपाल झर्ने, तौल बढ्दै जाने र भविष्यमा गएर उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रोर तथा मधुमेहसँगै बढेर जाने लगायतको समस्या देखिने गर्दछ ।
कसैकसैमा भने यो रोगका कारण निःसन्तानपन एवं बाझोपनाको समस्या समेत आउने गर्छ ।
महिलाहरुमा भएको हर्मोनको रोग मध्य पीसीओएस् रोग साधारण समस्यामध्येमा पर्छ । यो थाइरोइडपछिको महिलामा देखिने दोस्रो ठूलो समस्या हो । यो समस्या महिलाहरुमध्ये पनि धेरैलाई हुने गर्दछ ।के हुन् लक्षण ?
मूलतः यो समस्या महिलाहरु किशोरावस्थामा प्रवेश गरेसँगै सुरु हुने गर्दछ । जसलाई हामी सामान्य भाषामा महिनावारीको गडवडी पनि भन्ने गर्दछौं । २० देखि ४० वर्षका युवामा बढीमात्रामा देखिने यो रोग विशेषगरी प्रजनन उमेरका महिलाहरुमा बढी हुने गर्दछ ।
पीसीओएस् हुने कारण के हो ?
महिलाहरुमा पीसीओएस् विभिन्न कारणले हुने गर्दछ । जसमध्य वंशज एउटा कारण हो । यदि आमालाई यो रोग लागेमा ऊबाट जन्मिएका छोरीहरुमा पनि यो समस्या देखिने गर्दछ ।
खानपिन, आधुनिक जीवनशैलीका कारण तथा मोटोपना हुने मानिसमा पनि यो समस्या देखिने गर्दछ ।
त्यस्तै, वातावरणीय प्रदुषण, खानामा मिसावट, विभिन्न विषाक्त रसायनको प्रयोगले पनि यो लगायत विभिन्न प्रकारका हर्मोनका रोग निम्तिने गर्दछ ।
के यो रोग पुरानो रोग हो ?
त्यसो त यो रोग पुरानै मानिन्छ । नेपालमा किन नयाँ देखियो भने पहिले पहिले मानिसहरुलाई यसबारे धेरै जानकारी हुँदैनथ्यो । यो सम्बन्धी विशेषज्ञहरुको कमी हुँदा यो रोग पत्ता लगाउन कठिन हुने गर्दथ्यो ।
अहिले हर्मोनका विशेषज्ञ नेपालमा उपलब्ध हुन थालेपछि तथा यस सम्बन्धि जाँच तथा उपचार हुन थालेपछि यो रोग बढेको देखिन्छ । तर, यर्थाथमा भन्नु पर्दा यो पहिलेदेखि नै भइरहेको रोगमध्यको एक हो ।
यो रोग हर्मोनको गडबडीका कारणले हुने भए पनि यसमा र थाइराइड रोग बीच खासै कुनै सम्बन्ध रहँदैन । यी दुवै भिन्नाभिन्नै रोगहरु मध्यमा पर्दछ । तथापि थाइराइड रोग महिलामा बढी देखिने र यो रोग पनि महिलाहरुसितै सम्बन्धित हुने भएकाले थाइराइड रोग भएकाहरुलाई पीसीओएस् हुने सम्भावना पनि बढी मात्रामा रहने गर्छ ।
बंशजका कारण यदि कसैलाई यो रोग लागेको छ भन्ने त्यसको रोकथाम गर्न सकिन्न । तर, वातावरणीय कारण जस्तै, खानपिन, आधुनिक जीवनशैलीका कारण हो भने जीवनशैली परिवर्तन गर्न लगाएर, तौल घटाएर पनि केहीहदसम्म यो रोगको लक्षण कम गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, रसायन प्रयोग भएको खानेकुरा, सागसब्जी, फलफूल, माछामासुको पहिचान गरी त्यस कुराको न्यून सेवनले पनि यो रोग लाग्नबाट आफूलाई बचाउन सकिन्छ ।
सामान्यतः यसको उपचार लक्षणमा भर पर्ने गर्दछ । मानिसको लक्षण अनुसार नै चिकित्सकहरुले विभिन्न विधिद्वारा यसको उपचार गर्छन् । त्यसबाहेक यी कुरा गरेमा पनि यसको उपचार गर्न सम्भव हुन्छ ।
१. त्यसका लागि पहिलो कुुरा भनेको तौल घटाउने नै हो । त्यसको लागि खानपिनमा ध्यान दिन तथा व्यायाम जरुरी छ ।
२. सामान्यतया कुनै महिलामा पुरुषको हर्मोन बढी भएमा त्यसले महिनावारी गडबडी गराउँछ । त्यस्तो परिस्थितिमा औषधीको माध्यमद्वारा चिकित्सकले बाहिरैबाट उक्त महिलालाई महिलाको हर्मोन सेवन गराएर पनि महिनावारी सुचारु ग्ाराउर्ने गरिन्छ ।
३. कसैमा यो रोगको कारण शरीर तथा अनुहारमा रौं पलाउने समस्या देखिएमा हर्मोनको औषधिद्वारा पनि यसको उपचार गरिन्छ ।
४. कोहीमा निसन्तानपन देखिएमा महिलाहरुलाई पाठेघरमा अण्डा राम्रो बनाउने औषधि सेवन गर्न लगाएर तथा अण्डालाई समयमा फुटाउने औषधि दिएर पनि निसन्तानपनको उपचार गरिन्छ ।
यस अर्थमा यसको उपचार सम्भव रहेको चिकित्सकको भनाई छ ।
यद्यपी कसैलाई पीसीओएस् भए नभएको कुरा त्यसको लक्षणबाट नै थाहा पाउन सकिन्छ । जसमा महिनावारीको गडबढी नै प्रमुख हो । वर्षमा कम्तीमा पनि ८ साइकल भन्दा कम महिनावारी भएमा त्यसलाई यो रोग लागेको शंका गरिन्छ ।
त्यस्तै, दण्डीफोर तथा रौं धेरै आएमा तथा विवाह भएको केही समयसम्म पनि निसन्तान देखिएमा यो रोयग लागेको शंका हुन्छ ।
त्यसबाहेक, पुरुषको हर्मोन धेरै हुने ‘टेस्टेस्ट्रोन’, ‘डिएच्एस्’ हर्मोनको चेकजाँचमार्फत पनि यो रोग लागे नलागेको पत्ता लगाउन सकिन्छ । भने अण्डासयको अल्ट्रासाउण्डमार्फत अण्डाशयमा सिस्ट भए , नभएको हेरेर पनि यो रोग पत्ता लाग्ने गर्दछ ।
Posted by Dr Ansumali Joshi at 11:21 AM
- See more at: http://www.nepalihealth.com/2016/11/23/12891/#sthash.VjytKxL7.ESEbBFH0.dpuf
Posted by Dr Ansumali Joshi at 11:17 AM
थाइराइड रोग लाग्नुका कारणहरु निम्न छन्ः
१. थाइराइड रोग सामान्यतया शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी भएकै कारण लाग्ने गर्छ । वंशानुगत रुपमा पनि यो रोगले सताउने गर्छ ।
२. रुघा लागेमा वा भाइरल इन्फेक्सन भएमा थाइराइड ग्रन्थिमा संक्रमण भएर यो रोग देखिन सक्छ ।
३. विभिन्न केमिकल्स (रसायन) र अन्य कारणले वातावरणीय प्रदुषणले गर्दा पनि यो रोग लाग्ने गर्छ ।
४. ल्ाामो समयसम्म औषधिका प्रयोगले पनि मानिसहरुमा थाइराइडको समस्या देखिने गर्छ । जस्तैः मानसिक रोग, मुटु रोगका बिरामीलाई प्रयोग गरिने औषधिका कारण पनि थाइराइड रोग लाग्न सक्छ ।
५. विभिन्न विकिरणको प्रयोगले पनि थाइराइड क्यान्सर हुने सम्भावना रहन्छ ।
हर्मोनको गडबडी भएमा शरीरमा थाइराइड रोगका विभिन्न लक्षण देखा पर्न सक्छन् । त्यसमध्ये केही लक्षण यी हुन् ः
– कपाल धेरै झर्ने
– दुब्लाउने वा मोटाउने
– शरीरमा पसिना बढी आउने वा कम आउने
– निद्रा बढी लाग्ने वा कम लाग्ने
– कब्जियत हुने वा झाडापखाला लाग्ने
– महिनावारी गडबडी हुने
– मुटु जोडसँग ढुकढुक हुने
– हात काँप्ने
– गर्मी बढी हुने वा जाडो हुने
– छाला खस्रो हुने
– निःसन्तान समस्या ।
थाइराइड रोगमा पनि सबैभन्दा बढी देखिने समस्या भनेको हाइपो थाइराइडिज्म हो । हर्मोनको उत्पादन कम भएमा यो रोग लाग्छ । पुरुषको तुलनामा महिलामा यो रोग बढी देखिन्छ । खासगरी २० देखि ४० वर्ष उमेरसमूहका प्रजनन उमेरका महिलालाई बढी सताउँछ । यसका साथै सीमित रुपमा पुरुष तथा बालबच्चाहरुलाई पनि यो रोग लाग्न सक्छ ।
त्यसो त थाइराइड रोग लागेका मानिसले काउली र बन्दा खानै हुँदैन भन्ने भ्रम छ । तर, यो रोग खानपिनसित खासै सम्बन्धित हैन । दिनमा डेढ/दुई किलोभन्दा बढी काउली वा बन्दा खाएमा मात्र समस्या हुने हो । त्यति मात्रामा नेपालीहरुले प्रायः नखाने भएकाले खानेकुरासँग थाइराइडलाई जोडेर डराउनु पर्दैन ।
थाइराइडका बिरामीहरुले विशेषगरी आयोडिनयुक्त नुन र सी फुड (सामुद्रिक खाना) बाट जोगिनुपर्छ । बढी आयोडिन र समुद्रबाट निकालिएका माछाले हानि गर्छ । नेपालमै नदीनाला र पोखरीमा पाइने माछाले भने केही बिगार गर्दैन । तर, यस्ता खानेकुरा भरसक कम खानुपर्छ ।
हाइपो थाइराइड भएका बिरामीहरुमा मोटोपनको समस्या बढी हुने भएकोले मोटोपन घटाउन ध्यान दिनुपर्छ । ती बिरामीले विशेषगरी भात, आलु, मैदा, गुलियो, चिल्लो लगायतका क्यालोरी अधिक हुने खानेकुरा कम खानुपर्छ ।
त्यसो त हाइपर थाइराइडिज्म हाइपोको तुलनामा केही जटिल मानिन्छ । सही तरिकाले उपचार नभएमा यसले ज्यान नै जोखिममा समेत पार्न सक्छ । त्यसैले यसको उपचार समयमै गरिहाल्नुपर्छ । औषधिको सेवनबाटै यो रोग निको हुन्छ । कतिपय बिरामीले रेडियो एक्टिभ आयोडिन भन्ने विशेष किसिमको औषधि सेवन गर्नुपनर्ेे हुन्छ ।
थाइराइड नोडुल वा क्यान्सर
थाइराइड ग्रन्थिमा गिर्खा पलायो भन्दैमा त्यो क्यान्सर नै हुन्छ भन्ने छैन । तर, त्यसको लागि चिकित्सकको निगरानीमा बसेर फलोअफ गर्नु जरुरी हुन्छ । किनकि कतिपय त्यस्ता गिर्खा वा डल्ला पछि गएर क्यान्सरमा परिणत पनि हुन सक्छ । त्यो गिर्खालाई शल्यक्रियाबाट फाल्नुपर्ने हुन्छ ।
केही गरी थाइराइड क्यान्सर भइहाले पनि त्यो त्यति डरलाग्दो रोग भने हैन । यो निको हुने क्यान्सरमध्येमा पर्छ । तर, त्यसको पहिचान समयमा हुन जरुरी छ । कसैलाई थाइराइड क्यान्सर भए-नभएको साधारण भिडियो एक्स-रे र एफएन इसी जाँचबाटै थाहा हुन्छ । रोग पहिचानपछि यसको उपचार भनेको शल्यक्रिया नै हो । शल्यक्रियापछि पनि बिरामीले चिकित्सकको निगरानीमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै पनि थाइराइडमा क्यान्सर देखा परेमा त्यसमा सुरुमा डल्लो पलाउँछ । बाहिरबाट नदेखिए पनि अल्ट्रासाउण्ड गर्दा डल्लो देखिन सक्छ । उक्त डल्लो जाँच गर्दा क्यान्सर भए-नभएको पत्ता लाग्छ ।
थाइराइडका बिरामीले थाइराइड ग्रन्थिमा क्यान्सर भए-नभएको पत्ता लगाउन वर्षमा कम्तीमा एक पटक थाइराइडको अल्ट्रासाउण्ड गर्नु उचित हुन्छ । थाइराइड नभएकाहरुले पनि घाँटीमा कुनै गिर्खा देखा परेमा चिकित्सकसित परामर्श लिइहाल्नुपर्छ ।
थाइराइडप्रति मानिसहरुमा धेरै भ्रम छ । हर्मोनको गडबडीका कारण थाइराइड रोग हुनेहरुमा निःसन्तानपनको समस्या हुने गर्छ । तर, त्यसको समयमै उपचार भएमा त्यो समस्या रहँदैन ।
थाइराइड रोगप्रतिको भ्रमकै कारण नेपालमा कयौं युवतीको थाइराइड रोगकै कारण बिहेबारीमा पनि समस्या हुने गरेको छ । सन्तान हुँदै नहुने डरले उनीहरुको बिहे नहुने गरेको छ । तर, थाइराइड रोगको उपचार समयमै भएमा अरु सामान्य युवती जस्तै थाइराइड रोग भएकाहरुमा पनि गर्भ रहने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ ।
अर्को भ्रम छ, थाइराइड रोग लागेपछि काउली र बन्दा खान हुँदैन । जुन गलत हो । थोरै मात्रामा खाँदा त्यसले केही हानि गर्दैन ।
थाइराइडका बिरामीहरूमा औषधी सेवनबारे पनि भ्रम देखिन्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने बिरामीले यो रोग लागेमा जीवनभर औषधि सेवन गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ छ । तर, त्यस्तो हैन । यदि भाइरल इन्फेक्सनको कारण यो रोग लागेको हो भने आफै निको हुन्छ । त्यसमा औषधिको सेवन केही समयको लागि मात्र आवश्यक पर्छ ।
कतिपय थाइराइडका बिरामीलाई औषधि खानु हँुदैन भन्ने पनि भ्रम छ । यसले शरीरलाई बिगार्छ भन्ने मान्यताका कारण उनीहरु आयुर्वेदिक उपचारतिर लाग्छन् । तर, हाइपो थाइराइडिज्म कम हुने बिरामीहरुको हकमा चिकित्सकले शरीरमा कम भएको हर्मोनलाई नै औषधिको रुपमा सेवन गराइरहेका हुन्छन् । यस अर्थमा यसभन्दा प्राकृतिक उपचार केही हुँदैन ।
अर्को भ्रम छ, व्यायाम गरेमा थाइराइड रोग निको हुन्छ भन्ने । हामी स्वस्थ रहन नियमित व्यायाम जरुरी त हुन्छ । तर, थाइराइड रोगमा भने व्यायामले कुनै काम गर्दैन । किनकि यो रोग जीवनशैली र शारीरिक कसरतसँग सम्बन्धित हैन ।
कतिपयमा थाइराइडले मधुमेह नित्याउँछ भन्ने पनि भ्रम रहेको पाइन्छ । खासमा यो सत्य होइन । तर, थाइराइड रोगमा मोटोपनको समस्या हुने र मोटोपनसँगै मधुमेह पनि निम्तिन सक्ने भएकोले त्यसप्रति सजग भने हुन जरुरी छ ।
त्यस्तै, कति मानिसलाई थाइराइड जटिल रोग हो भन्ने पनि भ्रम छ । तर, यो साधारण रोग हो, नियमित औषधि सेवनले निको हुन्छ ।
Posted by Dr Ansumali Joshi at 11:13 AM